Ọganihu Mahadum »Mahadum Hodges
Ọrụ nke ngalaba Ọganihu Mahadum bụ ịzụlite mmekọrịta ya na ndị okenye, ndị enyi, na nnukwu obodo iji kwado ozi ụlọ akwụkwọ ahụ iji kwadebe ụmụ akwụkwọ ka ha nwee ike ịkwalite mmụta dị elu na mbọ ha, ọrụ, na nke obodo. Ndị ha na Mahadum Hodges ghọtara na ụlọ akwụkwọ a pụrụ iche n'ezie. O bu obodo di iche-iche di ebube juputara na ndi mmadu ndi nwere mmasi na oru di iche-iche.
N'ebe a, ọ dịghị ụzọ abụọ dị ka.
N'agbanyeghị nke ahụ, otu ala na-akọwa mpaghara anyị, bụ ịrụsi ọrụ ike na ọchịchọ ịmezu nnukwu ihe, ịga n'ihu, na ịmepụta ndụ ka mma maka onwe ha, ezinụlọ ha, yana obodo.
Ozugbo ejikọtara gị na Mahadum Hodges, ọ bụ akara doro anya na ị bụ onye ndu na-anabata ezigbo ọfụma.
Na ihe karịrị ndị gụsịrị akwụkwọ 6,000, mmekọrịta anyị na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ anyị na-eto eto, yana njikọ B2B anyị, anyị na-agba mbọ ijere gị ozi nke ọma mgbe ị gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ dịka onye ọrụ ibe gị. Mkpakọrịta gị na Mahadum Hodges gbasara anyị, na anyi choro inu gi.
Ahụmahụ gị, ma ọ bụ dị ka nwa akwụkwọ ma ọ bụ dị ka enyi, bara uru maka uto anyị na mbọ anyị na-agba. Biko mee ka anyị dị ọhụrụ site na ihe ị na-eme ugbu a yana ụzọ ị na-ahụ Mahadum Hodges na-ewusi ọrụ ya ike na ụwa gị… na n'ezie, gaa na mgbe mgbe!
Otu onye na-akwado Mahadum Hodges ghọtara na onyinye ha bụ maka iburu nsonaazụ n'uche. Ọ bụ maka inye nkwado dị mkpa, n'oge kachasị mkpa, nye mmadụ, ka ha wee mezue ebumnuche ha- ebumnuche bụ isi nkuku iji mee ka ndụ ha na obodo ha ka mma. Anyị niile maara na agụmakwụkwọ nwere ike ịgbanwe ndụ yana mgbanwe anaghị abịa ọnụ ala.
Mana, asambodo ahụ ma ọ bụ asambodo enwetara enweghị ike iwepụ ya na mmezu nke onye ahụ mepụtara onye otu ọhụụ sonyere na obodo anyị.
Ọ bụ nkwado gị, nke ahụ nwere, nke ahụ ga-agbanwekwa ebumnuche nke ndụ.
Anyị enweghị ike ịkele onye ọ bụla n’ime gị maka nkwado a mana biko mara na anyị ga-agba mbọ!
Na-eche nche! Biko biko kpọtụrụ!
Angie Manley kwuru
Iji kekọrịta mkpakọrịta gị na Mahadum Hodges ma ọ bụ ịmụtakwu banyere ụzọ ị ga - esi kwado nwa akwụkwọ Mahadum Hodges, biko kpọtụrụ Angie Manley, Director nke Ọganihu Mahadum, 239.938.7728 OR email na amanley2@hodges.edu.
Biko pịa njikọ dị n'okpuru iji gosi nkwado gị taa!
Nye ugbu a!